“Umrii labsichaa dheeressuus gabaabsuus kan danda'u uummata” - Pirezidaanti Lammaa Magarsaa
Caffeen Oromiyaa, yaa'isaa torbaffaa tibbana geggeeffateen raawwii karooraa baatii ja'aa nanannichaarratti mari'ateera. Yaa'icharrattis dhimmooti hawaasumma, siyaasaafi dinagdee naannichaarratti xiyyeeffannaa mariichati. Keessumaa, nageenya naanichaa mirkaneessuufi labsii yeroo hatattamaarratti mari'ateera.
Gabaasa raawwii baatii ja'aa hoji raawwachiiftuu Mootummaa Naannoo Oromitaa kan dhiyeessan Pirezidaantiin Naannichaa Obbo Lamaa Magarsaa akka jedhanitii, nageenyaa naannichaa mirkaneessuufi qaamolee ollaa, kan akka Somaalee Itoophiyaa waliin akkaataa waliigaltee mallataa'eetiin, daangaa bulchiinsa addaa hundeessuufi daangeessu akka raawwatamuuf jalqabamuusaa yaadachisan.
Hojiin eegalame kun akka fiixaan hinbaaneef sassaabdotaa kiraatiin, nageenya naannichaa booressuun naannichaa dirree jeequmsaa gochuuf kallattii hundaan hawaasa nagaarrattii waraana banuudhaan, lubbuun namootaa akka darbu, qabeenyi akka manca'uufi mirgi namummaa akka sarbamu taasifamuu tuqu. Haaluma kanaan lammiileen Oromo nagaan waggoota hedduuf Naannoo Somaalee Itoophiyaa jiraataa turan kuma 710fi 662 akka buqqa'an himu.
Haaluma kanaan qaama rakkoo kana uume seeratti akka dhiyaataniifi rakkoon daangaan walqabatee jiru bu'uuraan furuudhaaf bu'aan sagalee uummataa duraan geggeffamee akka hojiirra oolu hojjetamaa jira jedhan. Naannawaa garagaraattii qaamolee nageenyaan miidhaawwan hawaasarra ga'aa ture, keessumaa tarkaanfi lammiilee nagaarratti fudhatamanirratti mootummaan kan gadduu ta'uu eeruun, qaamolee gochaa kana raawwatan seeraan akka ittigaafatamaniif koreen dhimmicha qulqulleessu hundeeffamee kan hojjetamaa jiru ta'uufi qorannoon isaa akka xumurameen ummataaf kan ifoomsamu ta'uu dubbatu. Nageenyaafi olaantummaa seeraa mirkaneessuuf naannichi naannnolee ollaa waliin hojiilee hojjetu cimsee kan itti fufuu ta'uufi caasaan nageenyaa naannichaa gaacha ummataa ta'e akka hojjetuuf dandeettiifi humnasaanii cimsuun xiyyeeffanaanna akka hojjetamudha kan ibsan.
Bara darbeefi baranaa hojiin mootummaa naannichaa hedduun hojiilee nageenyaa akka xiyyeffatee tures ibsanii, caasaa nageenyaa ga'oomsuurratti ciminaan hojjeteera jedhu. Caasaan nageenya naannichaas daandii baratameen utuu hintaane daandii adda ta'een akka hojjetuuf mootummaan naannichaa baasii hedduu baasuufi bu'aa argamsiisuus eeran. Kun ta'ee garuu qabeenyaa jiru caasaa nageenyaa qofaaf oolchuu qofaan rakkoo keessa ba'uun hindanda'amu. Rakkoo fuulduraatti jiru hiikuuf qabeenya xiqqaa jiru duguugnee rakkoo mudatee hiikuuf ittigargaaramuun geengoo rakkoo keessa baasuu akka hindandeenye hubachiisan. Yeroo dheeraa keessaatii nageenya waaraa fiduuf falli dhumaa misooma jedhan.
Dhimmi biraan yaa'icharrattii ka'e keessaa waa'ee labsii yeroo hatattamaati. Nageenyi dhufeeraa waan ta'eef labsichii maaliif barbaachisaafi namoota miidhamaa jiran mootummaan naanichaa akkam ilaala kan jedhu gaaffilee miseensotaa caffichaarraa ka'an ture. Pirizidaantichis deebii kennaniin akka jedhanitti akkaataan itti labsichi itti labsame kan beekamuudha. Qaamni dhimmicharratti hojjetu dhimma mirga namummaaf bakka olaanaa kennee hojjechuu barbaachisaadha. Namoonni tokko tokko garuu akka inistitiyuutiittis ta'e dhuunfaatti miidhaa uumaa kan jiran ta'uuniifi kunis safartuu kamiiniyuu fudhatama hinqabu jedhan. Nama ajjeesuun, qaama miidhuun madaala kanarrattis mootummaan naannichaa callisee kan hinilaalleefi bakka namoonni miidhamanitti, namoota miidhaa geessisan seeratti akka dhiyaatan taasifama jira. Rakkoo Mooyaalee, Harargee-Qobbootti rakkoowwan dhaqqabaniifi namootaa rakkicha dhaqqabsiisan seeratti dhiyaataaa jiruudha kan jedhan. Mootummaan naannichaa fuuldurattis dhimmota akkanaa ciminaan hordofuun olaantummaa seeraa kan kabajchiisu ta'uu himan.
Akka Obbo Lammaan jedhanitti mootummaan naannichaa haala naannichaafi fedhii hawaasaa irratti hojjechuun akkuma eegametti ta'e, umrii labsichaa dheeressuus gabaabsuus kan danda'uu ummata keenya jedhan. Yoo uummanni hojiisaa nagaan hojjetee ba'ee, galle, labsicha labsii faayidaa hinqabne gochuun akka danda'amu eeru.
Nageenya naannawaa eegganaan, qaama dhimma biraatiif nu barbaadu qe'eesaani hindeemnu taanaan, labsichi hojiirra ooluu hindanda'u. Namoonni kana keessa gugatanii nama miidhuuf kaayyoo qaban akka golgaa hinargannes gochuun ni danda'ama. Kanaaf labsichi haa ka'uuf haa labsamuun iyyuu caalaa nageenya Oromiyaa ittifufsiisuun labsichaa faayidaa dhabsiisuun akka danda'amu ibsu. Labsii kaasaa labsii deebisaa hojjennaa yoo ta'e, akka Oromiyaaattis ta'e akka biyyaattii faayidaa kka hinqabnee hubachiisan.
Walumaagalatti nageenyi guddina misoomaa biyyattiif murteessadha. Nageenyi bakka hinjirretti waa'ee misoomaafi guddinaa haasa'uun waan hindand'amneef nageenyaa naannawaa eeggachuun fuulduratti tarkaanfachuun barbaachisaa ta'a.
Torban kana/This_Week 9622
Guyyaa mara/All_Days 1819042